Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. हेर्दाहेर्दै खस्यो विमान : प्रत्यक्षदर्शी, मानस घिमिरे – Emountain TV
हेर्दाहेर्दै खस्यो विमान : प्रत्यक्षदर्शी, मानस घिमिरे
काठमाडौं, २९ फागुन । हामी अफिसको सातौँ तलमा बैठकमा थियौँ त्यहाँबाट विमानस्थलको सम्पुर्ण दृश्य राम्ररी देखिन्थ्यो । करिव दुई बजेर १६ मिनेट गएको थियो । मैले बंगलादेशको युएस बंगाल जहाज पेप्सीकोला माथिबाट अत्यन्तै तलबाट उड्दै आएको देखेँ ।
हेर्दा त्यहाँको घरमै ठोकिन्जजस्छो थियो । त्या अनियन्त्रितजस्तो देखियो । विमानको त्यो अवस्था देख्ने वित्तिकै मलाई त्यसमा समस्या छ जस्तो लाग्यो । कार्यकक्षमा रहेका अन्य सहकर्मीले पनि विमानको त्यो अवस्था देखे । त्रिभुवन अन्र्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित कन्ट्रोल टावरको माथिबाट हुँदै जहाज त्यहाँ रोकेर राखिएको थाई एयरको विमानलाई छुँलाछुँलाजस्तो गरी माथिबाट त्यो विमान उडेको जस्तो देखियो ।
मलाई त त्यहा उडानका लागि तयार अवस्थामा रहेको सोर्यको एयरलाईन्सको प्लेनमा गएर ठोकिन्झैँ लागेको थियो । विमान धानवमार्ग रन वै भन्दा फरक दिशामा थियो । धावनमार्ग एकातिर छ तर त्यो विमान अर्कोतिर गएको देख्नेवित्तिकै हामीलाई अब दुर्घटनामा पर्यो भन्ने भयो ।, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।